Duqa Degmada oo Furay Ololaha Nadaafada iyo bilic soo celinta Magaalada Boosaaso[VIDEO] | SAHAN ONLINE
BOOSAASO –Duqa Caasimadda ganacsiga Puntland ee Boosaaso, ahan Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda maaliyadda Puntland C/salaan Bashiir Cabdisalaam ayaa ka qeyb galay ololaha Nadaafadda iyo Bilic soo celinta Caasimadda oo maanta si rasmi ah uga bilowday Boosaaso.
Ololaha oo sidoo kale ay ka qaybgaleen dhalinyarada is-xilqaamayaasha Boosaaso, waxaa uu bartilmaameedkiisu ahaa in la nadiifiyo qashinka yaal xaafadaha Suweeto iyo Xaafatul carab ee xeebta Boosaaso. Xaafadahan waxaa buuxiyay qashin tiro badan oo la dhigay.
“ Qorshahani, waxaan waday modooyinki u dambeeyay oo ah olole lagu nadiifinayo xaafadaha u dhow xeebta Boosaaso, taasi oo looga gol leeyahay in la helo magaalo nadiif ah” ayuu yiri duqa degmadda Bosaso.
Wuxuu sheegay in adeegsanayaan cagaf-cagafyo iyo iskorogooyin lagu daabuli doono dhammaan qashinka la dhigay xaafadaha xeebta u dhow
Duqu wuxuu sheegay in ujeedadu tahay in dhammaan qashinka lagu guro xaafadaha Boosaaso, ololuhuna uu sii socon doono, isagoo u mahadceliyay dhammaan shacabka ku nool labada xaafadood, oo uu sheegay inay ka qaybgaleen ololaha lagu soo celinayo bilicda xaafadahooda iyo magaaladda Bosaso.
Gabagabadii, waa markii u horraysay ee dhammaan shaqaalaha dowladda hoose ay ka qaybgalaan ololaha nadaafadda iyo bilic soo celinta magaaladda, iyadoo maanta ahayd maalin nasasho ah oo shaqaaluhu ay ka nastaan shaqooyinkii toddobaadka.